मडागास्कर, अफ्रिकी महाद्वीपको पूर्वमा एक सुन्दर टापु | Absolut यात्रा
माडागास्कर मा स्थित एक विशाल टापु हो हिन्द महासागर र दक्षिणपूर्वी तट बाट अफ्रिका। पहिलो पुर्तगाली औपनिवेशिक विगत र पछि फ्रान्सेलीको साथ, यसले १ 1960 in० मा यसको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो। जब हामी यसको बारेमा सोच्दछौं, हामी कल्पना गर्छौं कि यो टापुको विस्मयकारी प्रकृतिले भरिएको छ बाउबाब जंगल र मैत्री द्वारा जनसंख्यायुक्त लेमरहरू.
र यो सबै यी सबै चीजहरू छन्, तर मेडागास्करले हालैका दशकहरूमा भयंकर वन फँडानी भोगेका छन्। जे होस्, यसको एक ठूलो आकर्षण जारी नै छ प्राकृतिक पार्कहरू यसले लगभग सम्पूर्ण देशलाई समेट्छ र जसमा व्यावहारिक रूपमा कुमारी क्षेत्रहरू छन् जुन तपाईं मात्र आधिकारिक गाईडको साथ पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। बहुमूल्य समुद्र तट र साहसी शहरहरू तपाईंको लागि मेडागास्कर प्रस्ताव पूर्ण गर्नुहोस्। यदि तपाईं यो जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 माडागास्करमा के हेर्ने
1.1 अन्जाको रिजर्भ
1.2 Tsingy de Bemaraha राष्ट्रीय पार्क
1.3 इसालो नेश्नल पार्क, मेडागास्करमा हेर्नको लागि अर्को अचम्मको कुरा
1.4 Andasibé-Mantadia राष्ट्रीय पार्क
1.5 अन्य राष्ट्रिय पार्कहरू मडागास्करमा हेर्नका लागि
1.6 मेडागास्कर टापुहरू
1.7 अन्तानानारिवो, मडागास्करको राजधानी
2 तपाईलाई मडागास्कर भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय के हो
3 माडागास्करमा के खान गर्ने
4 मडागास्कर कसरी पुग्ने
स्पेन भन्दा थोरै ठूलो, यसको आन्तरिक को प्रभावशाली प्रकृति र यसको तटको सुन्दर समुद्र तट बीचको भिन्नता माडागास्करको एक विशेषता हो। हामी तपाईंलाई यसको राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको बारेमा र त्यसपछि यसको शहरहरूको बारेमा बताएर सुरु गर्न लाग्यौं।
लगभग चार हेक्टेयरको साथ, यो रिजर्व स्थानीय मालागासीको पहलको फल हो, जुन यसमा प्रबन्धनको जिम्मामा छन्। दीगो। तिनीहरूले यो धेरै जसो लेमर जनसंख्या बचाउनको लागि गरे। वास्तवमा, यदि तपाईं यी जनावरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, एउटा हो देश को प्रतीकत्यहाँ लगभग चार सय को रूप मा Anja को आरक्षित, सबै भन्दा राम्रो स्थान हो।
Tsingy de Bemaraha राष्ट्रीय पार्क
मा अवस्थित मेलाकी क्षेत्र माडागास्करबाट हो विश्व सम्पदा। The tsingys तिनीहरू पठार कार्ट सतहहरू हुन् जहाँ भूमिगत पानीले गर्दा असंख्य गुफा र विच्छेदहरू छन्।
त्यसकारण, यस पार्कको लागि तपाईंको भ्रमणले तपाईंलाई रक संरचनाहरू, गोर्जेस र गोर्जेस विश्वमा अद्वितीय देख्न अनुमति दिन्छ। तपाईं यो एक को लागी जान सक्नुहुन्छ फेराटा मार्फत जे होस्, यसले केही कठिनाई प्रस्तुत गर्दछ किनकि यससँग क्षैतिज र ठाडो खण्डहरू, साथै ह्या hanging्गि plat प्लेटफर्महरू छन्।
Tsingy de Bemahara प्राकृतिक पार्क
तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ सिसिबिहिना नदी अनुपम परम्परागत डु boats्गामा। तपाईं यसलाई देशको राजधानी, अन्तानानारिभोमा राख्न सक्नुहुनेछ, तर शहरको शहरमा पनि म्यान्ड्रिभाजो, जहाँ यात्रा सुरु हुन्छ।
इसालो नेश्नल पार्क, मेडागास्करमा हेर्नको लागि अर्को अचम्मको कुरा
यदि तपाइँले भ्रमण गर्नुभयो कोलोराडो को ग्रान्ड घाटी, तपाइँले यस पार्कमा के फेला पार्नुहुनेछ भनेर एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो रातो रंग र हरियाली को कमी को लागी आशा नगर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, तपाईले विशाल क्यानियनहरू पाउनु हुनेछ जुन गन्तव्यको बोट प्रजाति र निश्चित रूपले लेमरको साथ।
तपाईं सक्षम हुनुहुने छैन (न हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं) यो एक्लो भ्रमण गर्न। तपाईंले भाडामा लिनु पर्छ स्थानीय गाईड नजिकैको शहर मा रानोहिरा। र यो यो कि पार्क को यात्रा केहि घण्टा देखि केहि दिन सम्म रहन सक्छ।
Andasibé-Mantadia राष्ट्रीय पार्क
यो एन्टानानारिभोको एकदम नजीक छ र यसैले मालागासी मानिसहरू प्राय: भेटिन्छन्। यो लगभग पन्ध्र हजार हेक्टर क्षेत्र छ आर्द्र वन र एक विशाल पुष्प समृद्धि संग। तर यसको मुख्य आकर्षण यो हो कि त्यहाँ तपाईं लेमरको सबैभन्दा ठूलो प्रजाति देख्न सक्नुहुन्छ: तथाकथित इन्द्री-इन्द्री, जुन उचाइमा सत्तरी सेन्टिमिटरसम्म र वजनमा दस किलोग्रामसम्म पुग्न सक्छ।
अन्य राष्ट्रिय पार्कहरू मडागास्करमा हेर्नका लागि
पार्कमा आफूलाई यत्तिको विस्तार गर्न र तपाईंलाई मडागास्करको भ्रमणको लागि तपाईंलाई थप जानकारी प्रदान गर्न हामी तपाईंलाई यस टापुमा देख्न सक्ने अन्य प्राकृतिक ठाउँहरूको सारांश दिन्छौं। उदाहरण को लागी, उहाँलाई Andringitra राष्ट्रीय पार्क, यसको चट्टान पर्वतहरू चढाईको लागि उत्तम संग, र एक रानोमाफाना संग, मात्र एक जसमा गोल्डन बाँस, लेमरको अर्को प्रजाति।
Andrigitra राष्ट्रीय पार्क
तपाईंलाई थाहा छ, अफ्रिकी देश ठूलो टापु हो, तर यसमा धेरै साना व्यक्तिहरू छन् जुन तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्नेछ। यो कुरा हो सकातिया, मिट्सियो o टानिकेली, तर दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पर्यटक Nosy Be र सैन्टे मारी हो।
Nosy हुन यो असंख्य ज्वालामुखी क्रेटरहरूको साथ टापु हो जहाँ सुन्दर तालहरू स्थापना भएको छ। यो धेरै जसो द्वारा कब्जा गरिएको छ लोकोब प्रकृति रिजर्व जहाँ गिरगिटाहरूको प्रजाति र संसारमा सबैभन्दा सानो भ्यागुताहरूमध्ये एक: Stumpffia Pigmaea। तर सबै भन्दा माथि, यो टापु यसको लागि मडागास्करमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक हो शानदार समुद्र तटहरू.
अर्कोतर्फ, सैन्टे मारी योसँग सुन्दर बालुवा क्षेत्र र पैदल यात्रा पनि छ। तर यसको एक आकर्षण यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहरमा छ, अम्बोडिफोत्र्रा: हो सान्ता मारियाको चर्च, पहिलो माडागास्कर मा निर्माण गर्न को रूप मा यो १ 1857 XNUMX देखि मिति थियो।
अन्तानानारिवो, मडागास्करको राजधानी
मेडागास्करको प्राकृतिक आश्चर्यको माध्यम बाट हाम्रो यात्रा पछि, हामी अब यसको मुख्य शहरहरु को लागी जानेछौं। अन्तानानारिवो राजधानी हो र देशको बिचमा अवस्थित छ। यो भ्रमण गर्न, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं गाईडको साथ जानुहोस् किनभने यसमा खतरनाक क्षेत्रहरू छन्।
यो मा तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ रानी रोवा दरबार, जुन पुनर्निर्माण हो। पुरानो एक सेटको हिस्सा थियो जुन १ 1995 XNUMX in मा जलाइएको थियो। तर यो यसको लायक छ कि तपाईंले यसलाई लगाउने यसको इतिहास थाहा पाउन Imerina को किंगडम वा, अर्को तरिका राख्नुहोस्, पूर्व-औपनिवेशिक मेडागास्करबाट।
तपाईं पनि हेर्न सक्नुहुन्छ Andafiavaratra दरबार, एक बारोक निर्माण आज रूपान्तरण गरियो ऐतिहासिक संग्रहालय। दुबै भवनहरू अन्तानानारिभोको पुरानो भागमा छन्, जहाँ अन्य अनौठो घरहरू छन्।
यसको भागको लागि स्वतन्त्रता एवेन्यू यो शहरको मुख्य सडक हो र यसमा तपाईं असंख्य देख्नुहुनेछ औपनिवेशिक शैलीको घरहरू। यो राम्रो सुरु हुन्छ सोरोनो रेलवे स्टेशन र तपाईं यसलाई पनि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपति महल.
अधिक विशिष्ट छ Anakely बजार, जहाँ तपाईं स्थानीय बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनलाई भिजाउन सक्नुहुन्छ र खानाबाट शिल्पसम्म सबै प्रकारका उत्पादनहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा, तपाईं अन्तानानारिभोमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्याथेड्रल, १1873 मा निर्माण र साथै अनासॉय ताल, कृत्रिम र जसको केन्द्रीय टापुमा तपाईंले युद्धमा मरेकाहरूको लागि स्मारक देख्नुहुनेछ। यो ताल विशेष गरी असुरक्षित क्षेत्रमा छ, त्यसैले तपाईंसँग हुनुपर्दछ हेरचाह.
कल गर्नुहोस् डिएगो सुआरेज धेरै समय अघि यो देशको उत्तरी उत्तरमा रहेको यो शहर यसको मुख्य बन्दरगाहहरूमध्ये एक थियो। यस शहरको एक एक शानदार खाडीमा अवस्थित छ जुनबाट यसको विशेष उद्भव हुन्छ चिनी रोटी, एक आईलेटको पहाडसँग यसको समानताको लागि नाम छ रियो डी जनेरियो। तर सबै भन्दा माथि, एन्सेरियाना यसको विश्वव्यापी र यसको शानदार विरासतको लागि खडा छ फ्रेन्च औपनिवेशिक भवनहरू.
लगभग दुई लाख मानिसहरु को साथ, यो देश को मुख्य बन्दरगाह हो। उहाँ शासनकालमा हुर्कनुभयो राडामा Iउन्नाइसौं शताब्दीको मध्यमा, एउटा घृणित चरित्र जसले शहरलाई उसले दास भएका दासहरूलाई प्रस्थानको रूपमा प्रयोग गर्‍यो। यसको जनसंख्यायुक्त सडक बजारहरू बाहेक, जस्तै एकमा बजारी हुनुहोस्, यो तपाइँसँग प्रस्ताव गर्न बढी छैन। किनभने यसको समुद्री तटहरू सुन्दर छन् तर तिनीहरू मध्ये धेरैमा पौडी खेल्न निषेध गरिएको छ प्रदूषण र शार्कका कारण।
यसको सट्टामा, हामी तपाईंलाई कडा सल्लाह दिन्छौं कि यो सानो शहरको भ्रमण गर्नुहोस्। त्यहाँ यदि तपाईं पाउनुहुनेछ अद्भुत तटहरू जहाँ नुहाउने र खेल कयाकिंग जस्ता अभ्यास गर्ने। तर सबै भन्दा माथि, किनकि यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईं भव्य देख्न सक्नुहुन्छ बाओब्सको एभिन्यू। यो एक लामो मार्ग हो जुन यस प्रकारका असंख्य रूखहरूद्वारा चेन्न गरिएको छ, उनीहरूको आकार र उचाई दुवैको लागि धेरै उत्सुक छ।
मा विशेष ध्यान दिनुहोस् मायामा बाओबाब, दुई नमूनाहरू जो एक अर्कामा गाभिएका छन्। यो कसरी हुन सक्दछन्, तिनीहरूसँग सुन्दर छ स्थानीय कथा। यसले भन्छ कि तिनीहरू विभिन्न गाउँका दुई युवा व्यक्तिहरूलाई माया गर्छन् जो उनीहरूका देवताहरूलाई सँधै एकसाथ बस्न आग्रह गर्दछन्।
तपाईलाई मडागास्कर भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय के हो
यद्यपि अफ्रिकी मुलुकमा यसको आकारका कारण विभिन्न मौसमहरू छन्, सामान्य हिसाबले, सबैभन्दा चिसो महिनाहरू जुलाई र अगस्ट हुन्, तर सबैभन्दा तल्लो जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च। दिमागमा राख्नुहोस् कि यसको भौगोलिक स्थिति भनेको यसको स्टेशन स्पेनको तुलनामा विपरित तरिकाले वितरित गरिएको हो।
यद्यपि, गर्मी महिनाहरू वर्षा र चक्रवातको मौसमसँग मेल खान्छ, त्यसैले तपाईं ती मितिहरूमा यात्रा गर्न इच्छुक हुनुहुन्न। हाम्रो सल्लाह यो छ कि तपाईं मेडागास्कर जानुहुन्छ मे र अक्टुबर बीच। तापक्रम, यो जाडो मौसम हो, हल्का र धेरै कम वर्षा संग सुखद छ।
माडागास्करमा के खान गर्ने
अफ्रिकी टापुको ग्यास्ट्रोनोमीमा आधारभूत तत्त्व हुन्छ: चामल। यति धेरै कि यो दिनको सबै खानामा देखा पर्दछ, ब्रेकफास्ट सहित। त्यस्तै गरी, यो प्राय: सबै चीजसँग मिल्दछ: तरकारी, मासु, माछा र नरिवल जस्ता फलफूलहरू।
ठीक मालागासी को विशिष्ट डिश बराबर उत्कृष्टता हो चामल zebu संग। यो बोविड मेडागास्करको मुख्य मासु पनि हो, यद्यपि धेरै कुखुरा पनि खाइन्छ। वास्तवमा, यदि उनीहरूले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्छन् अकोहो र भोनियो यो कुखुरा र नरिवल संग एक चावल हो। यो समुद्री तटवर्ती क्षेत्रमा पनि धेरै विशिष्ट छ नरिवल चटनी मा माछा। अर्कोतर्फ फोजा एस र हेनाकिसोआ यो भातमा सुँगुरको मासु हो।
यसबाहेक, अमोलोना यो सुँगुरको मासु संग eel छ; लासोपी यो एक तरकारी ब्रोथ हो; को सेसिका यो एक प्रकारको स्वदेशी रगत सॉसेज हो जुन चामल र सिमीको साथ प्रयोग गरिन्छ ravitoto यो कुचिएको कासावाको साथ बनाईएको छ र जेबू वा सुँगुरको मासुको साथ।
डेसर्टको बारेमा, मोफो ग्यास र मोकारी यो एक प्रकारको चावल प्यानकेक र हो कोबा यो केक हो जसमा चामलको पीठो, मह, बदाम र पिस्ताहरू छन्। अन्तमा, तपाईंसँग दुईवटा विशिष्ट पेय छ। रानोन'पागो यो चामलको साथ बनेको हुन्छ जुन भाँडामा टाँसिन्छ जब यो पकाउदै र रम को व्यवस्था यो टापुको रम हो, जसमा भनिला र मह छ।
मडागास्कर कसरी पुग्ने
देशको मुख्य एयरपोर्ट हो हरुटानानैरिवो तर यो त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय हो Nosy हुन। त्यसो भए शहरहरू जस्तै अन्य एयरफील्डहरू छन् टोएमासिना, तर यो केवल आन्तरिक उडानहरू छ।
एक पटक माडागास्करमा, तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ कि यात्रा सजिलो छैन। सडकहरू थोरै र खराब अवस्थामा छन्। यसको बावजुद, लामो यात्राको लागि टापुमा यातायात पार उत्कृष्टता भनिन्छ ट्याक्सी ब्रोसे। यो एक किसिमको भ्यान वा मिनीबस हो जुन तपाईंले अधिक यात्राहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्दछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि ती मार्गहरू लामो र गह्रौं छन् त्यसैले तपाईसँग राम्रो मालागासी मानिसहरूलाई भेट्ने समय हुनेछ।
त्यहाँ एक रेलवे पनि छ। सबैभन्दा विशिष्ट तथाकथित हो जंगल ट्रेन, जसले उच्च पहाडी क्षेत्रबाट तटसम्म यात्रा गर्दछ। यात्रा एउटा पुरानो र असहज काफिले बनाएको हो जुन दुई सय किलोमिटर भन्दा कमको यात्रामा सात घण्टा भन्दा बढी लाग्छ। यद्यपि यो अनुभव दुबै मूल जनसंख्यासँगको सम्पर्कका लागि र अविस्मरणीय छ अद्भुत दृश्य यसले के प्रस्ताव गर्दछ।
अन्तमा, मुख्य शहरहरू भित्र सर्नको लागि, तपाईंसँग यो छ पोउसे पोउसे, जो प्रख्यातसँग मिल्दोजुल्दो छ रिक्शा भारत र अन्य एशियाली देशहरूबाट।
अन्त्यमा, मडागास्कर यात्राaअविस्मरणीय अनुभव। तपाईं अद्भुत परिदृश्य देख्नुहुनेछ, विश्वमा केहि अद्वितीय, तपाईंले जनसंख्या भएको शहरहरू चिन्नुहुनेछ, तपाईंले स्वादिष्ट गेस्ट्रोनॉमीको मजा लिनुहुनेछ र तपाईं आफूलाई अर्को संस्कृतिमा डुबाउनुहुनेछ। यी सबै भए पनि, हामी तपाईंलाई लिन सल्लाह दिन्छौं तपाईंको सुरक्षाको बारेमा सावधानी किनभने अफ्रिकी टापु यो जस्तो हुनुपर्दछ शान्त छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » मडागास्कर
माराकेचमा के गर्ने